IHotele yaMazwe ngaMazwe yaseTrump eyenza ilahleko eWashington, DC ithengisiwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » IHotele yaMazwe ngaMazwe yaseTrump eyenza ilahleko eWashington, DC ithengisiwe
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IHotele yaMazwe ngaMazwe yaseTrump eyenza ilahleko eWashington, DC ithengisiwe.
Ngaphandle kwebango lobuxoki likaTrump lokuba izise malunga ne-150 yezigidi zeedola ngexesha lakhe e-ofisini, amaxwebhu karhulumente abonisa ukuba le ndawo ilahlekelwe ngumongameli wangaphambili ngaphezulu kwe-70 yezigidi zeedola.
Ihotele ye-Trump International ikwisakhiwo sembali esineminyaka elikhulu ubudala kumbindi wedolophu yaseWashington.
Isakhiwo esiyimbali sesikarhulumente wase-US kodwa sinokuqeshwa ukuya kuthi ga kwiminyaka eyi-100.
Ifemu yotyalo-mali esekwe eMiami iCGI Merchant Group iceba ukulisusa igama likaTrump kwipropathi kwaye liyifake uphawu lweHilton's Waldorf Astoria.
Miami-based investment firm CGI Merchant Group uthenge amalungelo kwi ITrump International Hotel ibekwe kwisakhiwo sembali esineminyaka elikhulu ubudala kwidolophu yaseWashington, DC
ITrump International Hotel ibekwe kwiibhloko ezimbalwa ukusuka kwi-White House kwaye ihlala kwisakhiwo esiyimbali esikarhulumente wase-US kodwa sinokuqeshwa ukuya kuthi ga kwi-100 leminyaka.
Ihotele esele idumile ngexilongo abaxhasi bathi ukuzisa ilahleko ngaphezu inzuzo kwiminyaka yakutshanje.
Nangona kunjalo ngexilongo's ibango lobuxoki ukuba ihotele wangenisa malunga $150 million ngexesha lakhe e-ofisini, amaxwebhu karhulumente abonisa ipropati walahlekelwa umongameli wangaphambili ngaphezu $70 million.
Ikomiti yokongamela yeCongress yafumanisa ukuba ihotele ifumene malunga ne-3.7 yezigidi zeerandi kwiintlawulo ezivela koorhulumente bamazwe angaphandle, ezinokubonwa njengongquzulwano lwemidla olunokubakho.
Nangona kunjalo, amalungelo ehotele ngoku aza kuzisa iidola ezingama-375 ezigidi zeedola zowayesakuba nguMongameli waseMelika uDonald Trump.
Umthengi yinkampani yotyalo-mali esekwe eMiami CGI Merchant Group, eceba ukususa igama likaTrump kwipropati kwaye ilawule kwaye iphawulwe liqela likaHilton likaWaldorf Astoria.